Ururka Midowga Yurub oo Heshiisiiyay Xukuumadda Somaliland Iyo Xisbiyada Mucaaradka.
Sunday March 08, 2020 - 10:15:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wafdi ka socda ururka Midowga Yurub oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Hargeysa ee gobolka Waqooyi Galbeed ayaa soo afjaray khilaafaadkii ka dhex jiray xukuumadda Somaliland iyo Axsaabta mucaaradka.
Wararka naga soo gaaraya Hargeysa ayaa waxay sheegayaan in Muuse Biixi oo ah guddoomiyaha xisbiga Kulmiye iyo hoggaanka xisbiyada mucaaradka ah ee Ucid iyo Wadani ay heshiis ka gaareen dood adag oo ay mucaaradku ka qabeen gudiga cusub ee doorashooyinka.
Labada dhinac waxaa muddo laba goor ah la fariistay wafdiga ka socda Midowga Yurub waxaana lagu qanciyay in ay joojiyaan xasaradaha siyaasadeed kuna beddelaan xasillooni iyo in ay kala saxiixdaan hehsiiska.
Kulanka heshiiska lagu kala saxiixday ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada waxaana dhinacyada kala matalayay Muuse Biixi oo ah hogaamiyaha maamulka ahna guddoomiyaha xisbiya Kulmiye, Gudoomiyaha xisbiga Ucid Faysal Waraabe iyo kan xisbiga Wadani C/raxmaan Cirro.
Siyaasiyiinta Somaliland qaarkood ayaa dhaliilay qaabka uu ku yimid heshiiska iyagoo ka eegaya dhanka fara galinta ururka Midowga Yurub waxayna sheegeen in arrintan ay muujineyso ineysan jirin madax bannaani siyaaseed.
Waxay sheegeen iney habbooneyd in dhinacyada is khilaafsan ay dhexdooda xal gaaraan halkii wiilal iyo gabdho ka yimid Yurubta ay kala celin lahaayeen.